पासाङ ल्हामु स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ्गको फरक कार्यक्रम 'तीज अन द वाल'! - ParyatanBazar.com
पासाङ ल्हामु स्पोर्ट्स क्लाइम्बिङ्गको फरक कार्यक्रम ‘तीज अन द वाल’!
पर्यटन बजार२१ भाद्र २०७८, सोमबार मा प्रकाशित
भाद्र,२१ काठमाडौँ। पासाङ ल्हामु स्पोर्ट्स क्याम्बिङ्ग सेन्टर धुमबाराहीमा तीज अन द वाल कार्यक्रम सुरु भएको छ । यो कार्यक्रमले महिलाहरूमा तिज भनेपछि सधैँ साढ़ी र चोलीमा सजिएर मनाउने सोचाइलाई हटाएर नयाँ तरिका बाट पनि तिज मनाउन सकिन्छ है भन्ने भावनाको बिकास गराउने आयोजकहरू बताउँछन्।
योजना अनुसार एक हप्तासम्म त्यहाँ तीज मनाउने महिलाहरूले सशुल्क विशेष छुटमा क्लाम्विंग गर्न पाउने छन् । माउण्टेन एडभाइन्चर स्पोटर्स एकेडेमीको आयोजना, एक्सपेरिमेन्ट आवट डोस नेपालको सहयोगमा कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । संस्कृति र साहस संगसँंगै साहस वटुल्दै अघि बढ्दै आजका नारी नाराका साथ कार्यक्रम सुरु गरिएको हो ।
कार्यक्रम संयोजक सगरमाथा आरोही कल्पना महर्जनले तीजलाई अलि फरक तरिकाले मनाउने सोच राखेर तीजको अवसरमा तीज अन ड वाल सुरु गरेको जनाइन् । कार्यक्रम अनुसार उनले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म तीज फरक तरिकाले आफू मात्रै नभई अरूलाई पनि मनाउन लगाउँदै क्लाइम्विंग गराउँंदै छिन् ।